Somalia:R/wasaare C/weli Iyo Xubno Ka Tirsan Wasiirada Oo Booqday Xerooyin Ciidan – SAWIRRO | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > 10001, TFG Somalia, WARARKA	> Somalia:R/wasaare C/weli Iyo Xubno Ka Tirsan Wasiirada Oo Booqday Xerooyin Ciidan – SAWIRRO
C/weli Maxamed Cali R/wasaaraha dalka ayaa waxaa kormerkiisa ku wehlinayay wasiirka Gaashaandhigga, wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah, wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare, kusimaha taliyaha ciidanka booliiska ahna taliye ku xigeenka, gudoomiyaha dagmada Hodan iyo mas’uuliyiin kale oo katirsan dowladda KMG ah.
Ugu horeyn R/wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa gaaray mid ka mid ah saldhigyada ay kusuganyihiin ciidamada booliiska ee ku yaala dagmada hodan halkaasi oo ay diyaar ku ahaayeen cutubyo ka tirsan ciidamada booliiska oo uu salaan sharaf ka qaadtay R/wasaaraha.
Kusimaha taliyaha ciidamada booliska ahna taliye ku xigeen Genaral Saciid Daahir ayaa warbixin kasiiyay R/wasaare C/wali iyo xubnihi la socday sida uu u shaqeeyo mid ka mid ah saldhigyada kuyaala dagmada hodan.
Intii uu R/wasaaruhu ku sugnaa dagmada hodan ayaa sidoo kale waxaa uu booqasho ku tagay kuleej lagu xanaaneeyo kudhawaad 700 oo caruur agoon ah halkaasi oo uu qaar ka mid ah caruurtaasina uu kor u qaaday waxa uuna warbixin ka dhageystay maamulaha xeradaasi lagu xanaaneeyo caruurta.
Dr C/wali Maxamd Cali Gaas ayaa balan qaaday in ay xukuumadda muhiimad weyn siin doonto sidii loo hormarin lahaa caruurta isagoo shacabka Soomaaliyeed iyo hay’adaha samafalka ka codsaday in ay garabsiiyaan caruurta dhibaateysan.
Kormeerkaan uu maanta R/wasaaraha iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada ay ku tageen saldhigyada ciidamada booliiska ee kuyaala dagmada hodan ayaa qeyb ka ah dadaalka ay dowladda KMG ah ugu jirto niyad dhiska iyo dhiira galinta cidanka qalabka sida oo guulo waa weyn ka soo hoyay holagalada ka socda dalka.
Somalia:Ra’iisul Wasaaraha oo booqday Xerada Xannaanada Carruurta ee Al-Birri – SAWIRRO KSA:President Saleh signs Gulf-brokered power deal ending 33 years in office